Home / latestnews / Akhriso: Wararkii ugu danbeeyay ee ka dhacay caalamka , Qaraxyada, Dhimashada iyo Dhaawaca ee axad 29/09/2013.	Akhriso: Wararkii ugu danbeeyay ee ka dhacay caalamka , Qaraxyada, Dhimashada iyo Dhaawaca ee axad 29/09/2013.
33 qof ayaa ku dhimatay 70 kalena waa ay ku dhaawacan tay kagadaal markii laba qarax oo mataano ah ay ka dhaceen Magaalada Bishaawar oo kutaala waqooyi barri ee dalka Baakistaan, iyadoo qaraxaani dhacay todobaad kadib markii qaraxyo dhawr ah oo kuwaan lamid ah la la eegtay kaniisad ku taala wadanka baakistaan.
Qaraxyada ayaa ka dhacay meel banaanka ah saldhig istayshin oo ku yaala meel looyaqaano Quiswakhani, Booliiskuna waxaa ay sheegeen in ugu yaraan mid kamid ah qaraxyadu uu ahaa baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Haweenay qabtay xijaab ayaa waxaa ay ku qaylisay markii qaraxyadu ka dhaceen Pishawer , yaa qarxinaya Bishaawar, yaa ka danbeeyay , halka nin ah milkiile dukaan uu sheegay in uu sameeyay safari kala duwan uu dadka ku daabulayay si uu lix qof u geeyo cisbitaal kuwaasi oo ku dhaawacmay qaraxa.
Inkasta oo ilaa iyo hada aanay jirin qof sheegatay hadana sarkaal katirsan taalibaaniyiinta ayaa canbaareeyay kaasi oo kamid ah kuwa heshiiska kula jira dawlada ra iisalwasaare nawaz sharif , waxaana qaraxyadaani carqalad ku yihiin dadaalka dublamaasiyadeed ee baakistaan ku doonayso in ay heshiis kula gaarto taalibaaniyiinta qaar kood.
Ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhimatay magaalo ku taala koonfurta wadanka Ciraaq kadib markii nin naftii hure ah uu iskiis isugu qarxiyay goo baas lagu samaynay oo ay joogeen Muslimiinta Shiicada.
Qaraxa ayaa ka dhacay qol ku yaala masaajidka Mussayab oo 60 KM ( 40 Mile) koonfurta ka xiga caasimada wadanka ciraaq ee baqdaad, Booliiskuna waxaa uu sheegay in qaar kamid ah mayaydadku ay ku hoos jiraan hadhaaga bur burka iyadoo ugu yaraan 50 ruuxna ay ku dhaawacmeen qaraxa .
Dadka ku jiray masaajidka ee ka qayb qaadanayay aaska ayaa waxaa ay u baroor diiqayeen geerida ay kooxaha mintidiinta ahi maalin ka hor dileen, waxaa ila aiyo hada la tacaalayaa sidii looga soosaari lahaa maydadka ku hoosjira bur burka dhismaha .
Inta badan Maydadka ayaa waxaa ay yihiin kuwa firdhaad ah oo gacn iyo lugba meel taalo sida uu sheegay mid kamid ciidamada booliiska ee tagay goobta iyadoo ilaa iyo hadana aany ciday cida ka danbaysay weerarkaasi ismiidaaminta ah ee ay dadka badani ku dhinteen.
Dagaalada Ciraaq ayaa waxaa salka ku hayana firqooyin diimeedka kala gadisan gaar ahaan sunniyiinta iyo shiicada iyadoo dagaalka ciraaq uu saamayn ku leeyahay wadamada dariska la ah sida Suuriya , waxaana la rumaysan yahay in sunniyiin iyo shiico badan ay ka gudbeen xadka ay la wadaagaan wadanka suuriya.
Inkabadan 6.000 oo ruux ayaa lagu dilay dalka ciraaq tan iyo bilaawgii sanadkaan sida laga soo xigta kooxda kormeerka tirinta maydadka Ciraaq.
Mid kamid ah urur diimeedyada ka dagaalama wadanka Nigeria ayaa la tuhun san yahay in ay weerareen College ku yaala wadanka Nayjeeriya kaasi oo lagu barto cilmiga beeraha iyadoo ay weerarkaasin
a ku dhinteen ilaa 40 ruux oo u badnaa wiil arday ah oo dhigtay College kaasi.
Ardayda ku dhintay weerarkaasi ayaa jiifay dhismaha Collegeka iyadoo ay ahayd goor hore sida laga soo xigtay dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa xarunta College ka.
Kooxda weerarka gaysatay aya alo malaynayaa in ay qayb ka ahaayeen mintidiin Boko haram kuwaasi oo weeraray dhismaha Collegeka gaar ahaan qaybta Jiifka, iyagoo banaanka uga soo saaray dhismaha ardayda kadibna dilay kuwii isku dayay in ay dhismaha kabaxsadaan.
Markii ay gudaha u galeen dhismaha ayay bilaabeen in ay ardayda koox koox ugu kulmiyan banaanka kadibna waxaa ay ku fureen xabado oo dileen , iyadoo ay ahayd arrin aad u xanuun badan ayuu yiri mid kamid ah ardaydii ka badbaaday toogashada mintidiintii weerarka gaysatay.
Boko haram oo ah kooxdiimeed doonaysa in ay dawlad islaam ah ka aasaasaan waqooyiga Nigeria ayaa bilihii la soo dhaafay kordhiyay weeraradooda , waxana ay arintaan ay ku weerarayaan goobaha wax barashada sida Jaamacadaha, iskuulada iyo College yada ay aargoosi uga dhigayaan weeararada ay ciidamada milatarigu ku qaadaan qaybo kamid ah goobaha ay mintidiintu ka taliso.
Madaxweeynaha Nigeria Good Luck Jonathon ayaa dhawr bilood ka hor ku soo rogay xaalad amar jansi ah sadex gobo loo ka tirsan wadanka Nigeria oo ay kamid tahay gobta ay manta weerarka ka gaysteen.
Dawladaha Reer galbeedka ayaa wal wal kamuujinaya khataraha ku soo kordhaya wadomo badan oo ka tirsan qaarada Afrika sida Mali iyo Nigeria ee qaybta saxaraha ilaa Kenya oo ku taala bariga afrika halka soomaaliyana ay ka dagaalamayaan Al shabaab oo dhawaan 67 qof ku dilay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kooxo arday ah oo iska soo horjeeda iyo ciidamo hubaysan ayaa maalinimadii axada waxaa ay isku farasaareen magaalada qaahira halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 29 ruux sida laga soo xigtay warbaahinta dawlada iyo ilo dhinaca amaanka masar la xiriira.
Rabshadahaan ayaa waxaa ay dhex mareen taageerayaasha madaxweeynihi la afganbiyay iyo kuwa ka soo horjeeda iyadoo ay ka dhacday ugu yaraan sadex jaamacadood oo ku taala Masar.
Ardayada jaamacadaha ee taageersan Madaxweeyne Mursi ayaa banaanbax ka sameeyay mid kamid ah dhismaha jaamacada iyadoo ay booliiska masaaridu sheegeen in ay ahayd markii ugu horeysay oo ay la kulmaan mucaarad arday ah oo si wayn u abaabulan waxaana halkaasi ku dhaawac may 12 ruux
Waxaa kale oo iska hor imaad ku ka dhacay Jaamacada lagu magacaabo Zagzag oo ay ku dhaawacmeen 15 ruux waxaana isaga horyimid ciidamo hubaysan iyo koox arday ah, iyadoo wargayska al ahram oo ka soo baxa wadanka masar uu sheegay in koox aan lagaranaynin oo hubaysan ay toogteen ardadii socopdka banaanbaxa samaynaysay
Inkasta oo aanay warbaahinta caalamku xilligaan uga hadlin sida dhab ta ah xaalada wadanka Masar hadana waxaa muuqata in ciidamada milatarigu caburiyeen taageerayaasha Madaxweyne Mursi oo ay wadamada reer galbeedku taageereen afganbiga lagu sameeyay Mursi oo sanad ka hor doorasho xor ah oo madaxbanaan lagu soo doortay.
Ugu yaraan 16 qofood ayaa ku dhintay oo u badan arday wax kabaranaysay dugsi sare oo ku yaala magaalada Raqqa oo ah goob ay ka taliyaan mucaaradka wadanka Suuriya sida ay sheegeen dadka u ololeeya xuquuqda dadka.
Raqqa oo ah magaalo ku taala Waqooyi barri ee wadanka Suuriya ayaa waxaa maamula kooxaha ku kacsan madaxweeyne Bishaaral asad iyadoo ay bilihii la soo dhaafay taargad u ahayd milatariga wadanka Suuriya
Filim muuqaal ah oo ay soo bandhigeen dadka u dooda xuquuqda dadka ayaa mujinaya in dhiiga iyo gubashada haraaga maydka ay yihiin wax yaabo laga soo tuuray diyaaradaha dagaalka , waxaana qaar kamid ah dadka dhintay ay yihiin niman dhalinyaro ah o ay macquul tahay in ay 13 jir ilaa 19 jir yihiin.
Hay ad biritish ah oo u u dooda xuquuda aadanaha oo ka hawlgasha wadanka suuriya guud ahanatiisa ayaa sheegaysa in tirade dhimashadu ay gaarayso 16 ruux oo 10 kamid ah ay yihiin arday wax kabarata iskuulka sare ee weerarku ka dhacay.
Weerar ay maalinimadii sabtida ahayd ay kooxda mucaaradka wadanka suuriya ku qaadeen meel banaanka ah caasimada wadankaasi ee Dimishiq laguna magacaabo Qalamoun ayaa waxaa lagu dilay 19 katirsan dagaalyahaniinta dawlada madaxweyne bishaaral asad.
Waxaa kale oo sii kordhay tirade dhimashada baabur bambooyin laga soo biixiyay maalinimadii jimcaha ahayd magaalada Rankus oo ku taala waqooyiga Dimishiq iyadoo tirade gaartay 34 qof sida ay uu sheegay qalab baara waxyaabaha qarxa.
Inkabadan 100.000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka wadanka ciraaq oo soconaya muddo sadex sano ah kaasi oo noqday dagaalkii ugu dhiig daadashada badnaa taariikhda inta la ogyahay.
tweet Previous: Madaxweynaha Xasan Shiikh oo Muqdisho kusoo Noqday
Next: M O Faarax oo Email cabasho ah u diray Barclays Bank iyo Barclays oo ku dhawaaqay joojinta la shaqaynta Shirkadaha xawaaladaha Soomalaida.
Fadeexad: Dhagoolayaasha caalamka oo been abuur ku eedeeyay ninkii wax uga tarjumayay Munaasabadii Xuskii Nelson Mandela.
Daawo/Dhagayso:Khilaaf siyaasadeed kii ugu xumaa oo ka taagan Somaliland iyo Gudoomiye C/raxmaan Cirro oo afka Furtay.
Garowe: Musharixiinta Puntland oo M/weyne Faroole ugu baaqay kasoo qeygalka shir wada tashi ah
186 comments	Pingback: mark wintsman
Pingback: lainaa 10000
Pingback: Cool Coats to Pick Up This Winter
Pingback: sexy Winter hats 2013 2014
Pingback: How to get rid of back acne in a week
Pingback: New Bedford Escort
Pingback: graffiti nyc
Pingback: up front consultants
Pingback: sat math help
Pingback: mcculoch chainsaws
Pingback: probability theory dvds
Pingback: calculus 2 videos
Pingback: arithmetic help
Pingback: Saint-Etienne Pute
Pingback: no deposit ratings
Pingback: Hair Salon Orlando Fl
Pingback: Belas Putas
Pingback: garcinia cambogia extract dangers
Pingback: Fort Worth Call Girl
Pingback: buy vardenafil without prescription
Pingback: amoxidal respiratorio duo presentacion Here
Pingback: angel investing
Pingback: i Lawyer
Pingback: golf rangefinder reviews
Pingback: Broadcast network engineer
Pingback: Seagull S6 Original
Pingback: angular cheilitis vs cold sore
Pingback: video adulte
Pingback: РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ С‡С‚РѕР±С‹ Р»РёС†Рѕ РїРѕС…СѓРґРµР»Рѕ. Р’СЃРµРіРѕ РЅР°Р№РґРµРЅРѕ - 312
Pingback: smooth fine art
Pingback: sta clean pool and spa service